Aostralia: Adihevitra momba ny fiakanjo Silamo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2010 21:33 GMT
Tamin'ny herinandro lasa, raha mbola mba naka aina kely izahay teto amin'ny tontolon'ny bilaogy, dia adihevitra be no niseho mikasika ny akanjo fitondra milomano. Tsy mila olona lalim-pahaizana vao afaka mahita fa resaka fahasamihafana ara-kolotsaina no tena nifandirana. Tany ambanivohitr'i Melbourne no nanomboka ny fifandirana :
Niantso ny mponina handray an-tanana ny fotoan-dehibe Silamo ny Ben'ny tanànan'i DANDENONG ka tsy maintsy manao akanjo manarona ny vatana iray manontolo ny olona ao amin'izany.
Ity fotoan-dehibe izay atao mandritra ny alina ao amin'ny dobo filomanosam-bahoaka Dandenong Oasis ny 21 Aogositra 2011 ity dia mitaky ny mpandray anjara rehetra 10 taona no miakatra fa tsy maintsy manaja ny fomba fiakanjo izy ireo ary hatreny an-dohalika ny halavan'ny pataloha fohy miaraka amin'ny tee-shirt .
Angatahina ireo vehivavy sy lehilahy izay hanatrika ny lanonana, avy amin'ny kolontsaina maro samihafa, mba hanarona ny vatany tapany ambony, mitohy hatreny amin'ny kiho ary avy eo amin'ny valahana midina hatreny amin'ny lohalika.
Miaro ny baiko mikasika ny hanaovana ny akanjo manarona ao amin'ny dobo filomanosana Dandenong ny ben'ny tanàna
Miahiahy amin'ny mety ho anjara toeran'ny haino aman-jery hanita-dresaka mikasika ity hetsika ity i Julie Joy Clarke ao amin'ny Anything but human :
Raha tokony hampitony ny zava-misy eo amin'ireo vondrom-pinoana samihafa no atao, dia onjana fifandirana hafa indray no nitsangana noho ny tsy fampahafantaran'ny haino aman-jery .
Mety hoe ny Herald Sun an'i Melbourne no tao an-dohany :
Niteraka adihevitra mafana ny TETIKADY hanerena ny fianakaviana ny hanaovany akanjo manarona ny vatany mba hialana amin'ny fanohinana ny Silamo mandritra ny lanonam-bahoaka .
Mpamakin'ny heraldsun.com.au 94 isan-jato mahery be izao no tsy manaiky ny fitsipika izay mankato ny fandraràna ny disadisa mandritra ny Ramadany amin'ny taona ho avy .
Sahala amin'ny hoe fantany ireo izay mihaino azy. Mamaritra ny hetsika tsy mety amin'ity tantara nosoratan'i Stevo of melb ity ny tsikera voalohany (nahatratra 773 aloha hatreto ) :
Ka toy izany ny fanombohan'ny fanasilamoana [fanaovana ho silamo] ny fiarahamonina Aositraliana. Tsy ho ela akory atsy ho atsy, dia ilaina koa ny manana Sharia hitovy amin'ny rafitra eo amin'ny sehatry ny lalàna Aostraliana araka ny efa misy amin'izao fotoana izao any Angletera. Tena manaiky aho ho an'ny fampiharana ny finoana/zon'ny olona hafa, nefa kosa ny farafaharatsiny ny Silamo dia mila miaiky fa ao amin'ny firenena tsy silamo izy ary nefa mbola afaka mampihatra tanteraka ny finoany, tokony hanaiky izy ireo fa tsy mitovy mihitsy amin'ny any amin'ny firenena silamo izany.
Manao akanjo manarona ny vatana mandritra ny lanonana ao amin'ny dobo filomanosana amin'ny Ramadany amin'ny herintaona
Ny fomba fijery feno fandinihana an'i Julie Joy :
…raha hitanao fa tsy mety aminao ny milomano manao akanjo be~ sahala amiko , dia aza mandeha any, misy ora anjatony malalaka eo ahafahanao milomano foana
Na dia eo aza ity torohevitra ity, manazava ny marina mibaribary i Dan Zaremba ao amin'ny Australian Islamist Monitor, ‘Islam eo ambany fanaraha-maso ’:
Ny zo mitovy ho an'ny Silamo dia midika fa KELY ny zonao mihoatra ny azy amin'izany ary izany dia midika fa efa mipetraka sahady any Aostralia ireo lalàna miorina amin'ny Sharia mikasika ny dhimmitude.
Ary toy izany ny fomba fidiran'ny Sharia . Moramora any am-boalohany, avy eo mihamahazo laka,ary alohan'ny hahatsapantsika izany , dia manomboka manasazy ireo tsy Silamo isika noho ny tsy fanarahan-dalàna izay apetraka amintsika ataon'ny LALAN'ny Silamo .
Tsy mila vatana miseho any amin'ny dobo filomanosana Dandenong Oasis
Toa naneho ny nampanahy azy ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra Silamo any Victoria, i Shereen Hassan :
Mankasitraka ny ezaka nataon'ny YMCA ny tenako amin'ny fanapariahana ny fanoloran-tena tsara eo amin'ny Silamo sy ny tsy Silamo. Ny mampanahy ahy dia hiteraka fisavorovoroana ity lanonana ity araka ny efa hita sahady nandritra izay andro vitsivitsy lasa izay avy amin'ireo fangataham-bahoaka.
Nandrafitra ity hetsika ity sy ireo olana hafa ny fahitalavitra ABC Stateline miaraka amin'i Matt Feutrill, Sefo Teknikan'ny YMCA, iray amin'ireo mpanohana ny lanonana .
JOSEPHINE CAFAGNA: Nahataitra anao ve ny fihetsiky ny vahoaka ?
MATT FEUTRILL: Eny satria nihevitra izahay fa fanehoana an'i Aostralia maoderina izy ity ary ny kolontsaintsika mifangaro samihafa nefa tokana, tokana sy miaraka, miaraka ao amin'ireo fiarahamonina no zava-dehibe. Mahafantatra isika fa mitohy miha-manan-danja foana ny fifindra-monina aty Aostralia ho an'ny famokarantsika ho avy. Mahafantatra isika fa mila miezaka ny ho tafavoaka ary hijery lalam-baovao amin'ny fiaraha-miaina mirindra.
Voamarina ny baiko teo amin'ny dobo filomanosana (Horonantsary & feo )
Maneho fanadihadiana lalina mikasika ny fampiasana ireo tsikera avy amin'ny bilaogin'ny trano fampielezam-peo i Millsie. Afantony amin'ny fomba fampiasa ny troll eo amin'ny Blah Blah Blah , ny ‘Fanentanana , Boky fampihomehezana sy ny maro hafa ’ ny resaka. Manakiana ny mpaneho hevitra iray izy izay nanoratra hoe “Tsy mampino ahy mihitsy ny tsy fahalalam-pomban'ireto olona ireto . Aostraliana aho nefa sahala amin'ny hoe vahiny ny tenako ato amin'ity fireneko ity ”:
Ny tsy fahalalam-pomban'ny olona izay manoratra tsikera mikasika ny fatahorana ny Silamo ve? Tsia, ny tsy fahalalam-pomban'ny vehivavy Silamo izay miandry fa ny olona dia hanaraka ny fomba fiakanjony amin'ny lanonana manokana izay ataony .
Manontany ihany koa izy raha toa ka tompon'andraikitra amin'izany na tsia ny trano fampielezam-peo :
Azo tanana ho tompon'andraikitra amin'ny tsikera izay navela hipetraka eo amin'ny pejiny ve i 3AW ? Indrindra fa hita izany fa tsy rariny .
Ny fahatahorana ny Silamo & ny Troll ao amin'ny pejina tsikeran'ny 3AW
Teny farany avy amin'i Matt Feutrill:
Efa niara-niasa tamin'ny vondrom-behivavy milomano mitokana izahay nandritra ny roa taona lasa tany amin'ny tanànan'i Dandenong. Vondrona misy finoana maro ao anatiny, misy teratany maro, misy kilemaina maro izay mahazo aina kokoa rehefa miaraka milomano . Tamin'ity Ramadany ity, satria izy ireo dia mpikambana ao amin'ny fiarahamonina Silamo daholo, dia nahita ny vondrona fa traikefa nitondra voka-tsoa ny fiaraha-nankalaza ny Ramadany ka tian'izy ireo hitarina izany fe-potoana izany amin'ny herintaona , ary ho fialana amin'ny mahazatra, dia miandry ireo fianakaviambeny izy ireo mba ho avy, mba hanatona ity vondron'olona misy finoana mifangaro, fiaviana mifangaro ity, ka hiaraka hankalaza ny Ramadany .
Voamarina ny baiko teo amin'ny dobo filomanosana
Mety hahazo anjara amin'ny fampiantranoan'izy ireo ity mpanoratra ity amin'ny herintaona. Enga anie fotsiny ka hafana ny rano ao amin'ny dobo filomanosana, satria ho ririnina ny andro .
Sarin'ny akanjo fitondra milomano silamo avy amin'ny pejin'ny Flickr avy amin'ny Foxtongue, nahazoan-dalana avy amin'ny CC License Attribution 2.0 Generic.